အထူးကုဆရာဝနျကွီးလို့ တောငျတငျစားခံရတဲ့ မြောကျငိုသီးရဲ့ အစှမျး – Daily Feed MM
အထူးကုဆရာဝနျကွီးလို့ တောငျတငျစားခံရတဲ့ မြောကျငိုသီးရဲ့ အစှမျး
ရုက်ခဗဒေအမညျ Parkia Speciosa
ခငျြး Zawng Tah (ဇောငျတ)
ထိုငျး Sator / Satow
မ လေး စင်ျကာပူ
ဖိလဈပိုငျ U’ Pang
တရုတျ(မနျဒရငျး) Chou Dou ( ခြို့ သို့ )
အင်ျဂလိပျ Stink Bean/
မှတျခကျြ။ အ ဝရောပငျ ဘောစကိုငျးပငျ မဟုတျပါ။
ဆေးပညာရှငျမြား လလေ့ာဆနျးစဈခကျြအရ မြောကျငိုသီးမှာ သဘာဝသကွားသုံးမြိုးရှိတာကို တှေ့ ရ ပါ တယျ။ သဈသီးသကွား၊ ဂလူးကို့ဈ၊ ကွံသကာ တို့ဖွဈပါတယျ။ မြောကျငိုသီးမှာအမြှငျဓာတျမြားပါဝငျတာမို့အားအငျကိုဖွဈစပေါတယျ ။ မြောကျငိုသီးထဲ
မှာTryptophan ဓာတျ က လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲရောကျတဲ့အခါ Serotonin အဖွဈသို့ပွောငျးလဲသှားသောကွောငျ့စိတျကိုပေါ့ပါးစေ ပွီး စိတျနစေိတျထားကိုပွောငျး လဲပေးတာမို့ စိတျဖိအားကိုလြှော့စနေိုငျတဲ့စှမျးအားရှိပါတယျ။ ဗီတာမငျ B6 ပါရှိပွီးသှေးခြိုကိုမြှတအောငျညှိပေး
နိုငျတာမို့ စိတျကိုပြျောရှငျလနျးဆနျးစပေါတယျ ။ မွငျ့မားသောသံဓာတျပါရှိတယျ။ မြောကျငိုသီးရဲ့နှိုးဆှမှုကွောငျ့သှေးထဲမှ (hemoglobin) သှေးနီဥကို ကိုထုတျလုပျနိငျတာမို့သှေး အားနညျးတဲ့အခါ အထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။
အထကျပိုငျးဒသေမှာပေါကျပွီး ထူးခွားတဲ့မြောကျငိုသီး မှာ ပိုတကျဆီယမျ (potassium) အမြားဆုံး ပါဝငျပမေယျ့ အငံဓာတျက နညျးပါးတာမို့ အမရေိကနျ စားသောကျကုနျနှငျ့ဆေးပညာ ဆိုငျရာဌာနက မွောကငြိုသီးပာာ သှေးပေါငျ ကိုကြ စပွေီး လဖွေတျခွငျးမှ ကာ
ကှယျပေးနိုငျကွောငျး မြောကျငိုသီးရဲ့စှမျးအားကို မှတျတမျးတငျထားပါတယျ။ နှလုံးရောဂါအတှကျလညျး အ ထောကျအကူပွုပါတယျ။ နတေို့ငျး မနကျစာ၊ နလေ့ညျစာတှငျမြောကျငိုသီးကိုစားရငျ ဦးနှောကျအတှကျ အ ထောကျအကူပွုနိုငျ ပါတယျ။ ပိုတကျဆီယမျ မြားပါတာ
မို့ အသိဥာဏျ ပိုကောငျးလာခွငျး စိတျပြျောရှငျလနျးဆနျးစပေါတယျ။ အမြှငျဓာတျမြားပါဝငျတာမို့ ဝမျးခြုပျခွငျးမှကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ မြောကျငိုသီး နှငျ့ပြားရညျတို့စားခွငျးဖွငျ့ (အရကျမူးပွစေပေါတယျ) မြောကျငိုသီးနှငျ့ ပြားရညျက အစာအိမျကိုအနားယူစပွေီးသှေးခြို
ကို ညီမြှ အောငျညှိပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ မြောကျငိုသီးက လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲကိုရောကျတဲ့အခါ သဘာဝ ခုခံနိငျသော အကျဆဈ ဖွဈသှားတာမို့ အစာအိမျမ ကောငျးသူမြားအတှကျ မကွာခဏ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
ဝိတျကြ နိုငျစှနျးအားရှိပါတယျ။ ကိုယျဝနျရှိနစေဉျ မြောကျငိုသီး စားခွငျးဖွငျ့ မြောကျငိုသီးက သှေး ခြိုကို ညှိပေးနိငျတာမို့ အော့အနျခွငျးကို ကာကှယျပေးနိငျပါတယျ။ ခွငျကိုကျခံရတဲ့ နရောကို မြောကျငိုသီးလိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ အ ရပွေားယားယံ ရောငျနခွေငျးနှငျ့ နာကငျြမှု
ကိုလြှော့စတေယျ။ မြောကျငိုသီးတှငျ ဗီတာမငျ ဘီ ဓာတျမြားပါဝငျတာမို့ အာရုံကွောအတှကျ အ ထောကျအကူပွုပါတယျ။ မြောကျငိုသီးတှငျ Vit B6 , V12 ၊ ပိုတကျဆီယမျနှငျ့ မကျဂနီဆီယမျ ပါဝငျတာမို့ ကိုယျခန်ဓာပွနျ လညျကောငျးမှနျရနျ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ဆေးလိပျဖွတျရာတှငျ နီကိုတငျး(Nicotine )ကို ပကျြစီးစပေါတယျ။
“New England Journal of Medicine” လလေ့ာခကျြအရမြောကျငိုသီး မကွာခဏ စားတဲ့သူက လဖွေတျသဆေုံးရခွငျး အန်တရာယျမှ ကငျးဝေးနှုနျး၄၀% ရှိပါတယျ။ မြောကျငိုသီးက ပနျးသီးထကျ အသားဓာတျ လေးဆ (protein)၊ ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျ(
carbohydrate) ၊ ဖော့စပရပျ သုံးဆ( phosphorus) ၊ ဗီတာမငျအနှေငျ့ သံဓာတျက ငါးဆ။ အခွားဗီတာမငျနှငျ့ ပိုတကျဆီယမျမြားပါဝငျတာမို့ကနျြးမာရေးအတှကျ အသငျ့တျော ဆုံးအစားအစာ ဖွဈပါတယျ။ နတေို့ငျးမြောကျငိုသီးစားရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ကငျးဝေးတယျလို့
တောငျ ပွောကွပါတယျ။ ခဈြခငျလေးစားရသောသူငယျခငျြးတို့ ……….
မြောကျငိုသီး (Petai) က မလေးရှား ၊ ထိုငျး ၊ အငျဒိုနီးရှား ၊ စငျကာပူ ၊ မွနျမာနိုငျငံမြားတှငျ ရှိပါတယျ။ ဒညငျးသီးလို အနံ့ အရသာတူတယျလို့သိရပါတယျ။ ဒညငျးသီး အစား မြောကျငိုသီး စားတာက ကနျြးမာရေးနဲ့ ပိုသငျ့လြှျောပါတယျ ။ ဈေးလညျးခြိုအလှယျတကူ
ရနိုငျတဲ့ အစားအစာမို့ သူငယျခငျြးတှေ ကိုမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျ ။
မြောကျငိုသီးကိုအစလေ့ညျး စားလို့ရပါတယျသူ့အစကေ့သာမနျယောကျြားလကျတဆဈစာလောကျ ကွီးပါတယျ ကွျောစားဆားရညျစိမျ တို့စရာအဖွဈလညျးကောငျး ဒီအတိုငျးလညျး စားရပါတယျ အပငျကမကွီးပငျတို့လိုနှဈရှညျပငျပါ တခြို့အပငျတှဟောလကျနဲ့ အတောငျ
၃၀/၄၀ မွငျ့ပွီး အပငျရဲ့လုံးပါတျကလူ၂ဖကျစာလောကျ ကွီးမားပါတယျ။ အခှံကိုဇှနျးနဲ့ခွဈ မီးနဲ့ဘဲကငျကငျ ပွုတျပွီးပဲစားစား စားကောငျးတယျ ငပိခကျြနဲ့ရောခကျြလညျး စားကောငျးတယျ အနံ့က ဒညငျးသီးနဲ့ ဆငျပါတယျ။ ဘောစ(ဈ)ကိုငျးပငျနဲ့ မတူပါဘူး။ ဘော
စ(ဈ)ကိုငျးက အပူပိုငျးပေါကျပငျဖွဈပွီး မြောကျငိုသီးပငျက အ အေးပိုငျးပေါကျပငျဖွဈပွီး စဈကိုငျးတိုငျးအထကျပိုငျး တမူးမွို့နယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျ တှမှော အမြားအပွားရှိပါတယျ။
ရုက္ခဗေဒအမည် Parkia Speciosa
ချင်း Zawng Tah (ဇောင်တ)
ထိုင်း Sator / Satow
မ လေး စင်္ကာပူ
ဖိလစ်ပိုင် U’ Pang
တရုတ်(မန်ဒရင်း) Chou Dou ( ချို့ သို့ )
အင်္ဂလိပ် Stink Bean/
မှတ်ချက်။ အ ဝေရာပင် ဘောစကိုင်းပင် မဟုတ်ပါ။
ဆေးပညာရှင်များ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ မျောက်ငိုသီးမှာ သဘာဝသကြားသုံးမျိုးရှိတာကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ သစ်သီးသကြား၊ ဂလူးကို့စ်၊ ကြံသကာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မျောက်ငိုသီးမှာအမျှင်ဓာတ်များပါဝင်တာမို့အားအင်ကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ မျောက်ငိုသီးထဲ
မှာTryptophan ဓာတ် က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်တဲ့အခါ Serotonin အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်စိတ်ကိုပေါ့ပါးစေ ပြီး စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်း လဲပေးတာမို့ စိတ်ဖိအားကိုလျှော့စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ ဗီတာမင် B6 ပါရှိပြီးသွေးချိုကိုမျှတအောင်ညှိပေး
နိုင်တာမို့ စိတ်ကိုပျော်ရွှင်လန်းဆန်းစေပါတယ် ။ မြင့်မားသောသံဓာတ်ပါရှိတယ်။ မျောက်ငိုသီးရဲ့နှိုးဆွမှုကြောင့်သွေးထဲမှ (hemoglobin) သွေးနီဥကို ကိုထုတ်လုပ်နိင်တာမို့သွေး အားနည်းတဲ့အခါ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပိုင်းဒေသမှာပေါက်ပြီး ထူးခြားတဲ့မျောက်ငိုသီး မှာ ပိုတက်ဆီယမ် (potassium) အများဆုံး ပါဝင်ပေမယ့် အငံဓာတ်က နည်းပါးတာမို့ အမေရိကန် စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးပညာ ဆိုင်ရာဌာနက မြောကျငိုသီးပာာ သွေးပေါင် ကိုကျ စေပြီး လေဖြတ်ခြင်းမှ ကာ
ကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း မျောက်ငိုသီးရဲ့စွမ်းအားကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ နှလုံးရောဂါအတွက်လည်း အ ထောက်အကူပြုပါတယ်။ နေ့တိုင်း မနက်စာ၊ နေ့လည်စာတွင်မျောက်ငိုသီးကိုစားရင် ဦးနှောက်အတွက် အ ထောက်အကူပြုနိုင် ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ် များပါတာ
မို့ အသိဥာဏ် ပိုကောင်းလာခြင်း စိတ်ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်များပါဝင်တာမို့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မျောက်ငိုသီး နှင့်ပျားရည်တို့စားခြင်းဖြင့် (အရက်မူးပြေစေပါတယ်) မျောက်ငိုသီးနှင့် ပျားရည်က အစာအိမ်ကိုအနားယူစေပြီးသွေးချို
ကို ညီမျှ အောင်ညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မျောက်ငိုသီးက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါ သဘာဝ ခုခံနိင်သော အက်ဆစ် ဖြစ်သွားတာမို့ အစာအိမ်မ ကောင်းသူများအတွက် မကြာခဏ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ဝိတ်ကျ နိုင်စွန်းအားရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် မျောက်ငိုသီး စားခြင်းဖြင့် မျောက်ငိုသီးက သွေး ချိုကို ညှိပေးနိင်တာမို့ အော့အန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိင်ပါတယ်။ ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့ နေရာကို မျောက်ငိုသီးလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အ ရေပြားယားယံ ရောင်နေခြင်းနှင့် နာကျင်မှု
ကိုလျှော့စေတယ်။ မျောက်ငိုသီးတွင် ဗီတာမင် ဘီ ဓာတ်များပါဝင်တာမို့ အာရုံကြောအတွက် အ ထောက်အကူပြုပါတယ်။ မျောက်ငိုသီးတွင် Vit B6 , V12 ၊ ပိုတက်ဆီယမ်နှင့် မက်ဂနီဆီယမ် ပါဝင်တာမို့ ကိုယ်ခန္ဓာပြန် လည်ကောင်းမွန်ရန် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် နီကိုတင်း(Nicotine )ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
“New England Journal of Medicine” လေ့လာချက်အရမျောက်ငိုသီး မကြာခဏ စားတဲ့သူက လေဖြတ်သေဆုံးရခြင်း အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနှုန်း၄၀% ရှိပါတယ်။ မျောက်ငိုသီးက ပန်းသီးထက် အသားဓာတ် လေးဆ (protein)၊ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်(
carbohydrate) ၊ ဖော့စပရပ် သုံးဆ( phosphorus) ၊ ဗီတာမင်အေနှင့် သံဓာတ်က ငါးဆ။ အခြားဗီတာမင်နှင့် ပိုတက်ဆီယမ်များပါဝင်တာမို့ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော် ဆုံးအစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းမျောက်ငိုသီးစားရင် ဆရာဝန်နဲ့ ကင်းဝေးတယ်လို့
တောင် ပြောကြပါတယ်။ ချစ်ခင်လေးစားရသောသူငယ်ချင်းတို့ ……….
မျောက်ငိုသီး (Petai) က မလေးရှား ၊ ထိုင်း ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ စင်ကာပူ ၊ မြန်မာနိုင်ငံများတွင် ရှိပါတယ်။ ဒညင်းသီးလို အနံ့ အရသာတူတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒညင်းသီး အစား မျောက်ငိုသီး စားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုသင့်လျှော်ပါတယ် ။ ဈေးလည်းချိုအလွယ်တကူ
ရနိုင်တဲ့ အစားအစာမို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုမျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
မျောက်ငိုသီးကိုအစေ့လည်း စားလို့ရပါတယ်သူ့အစေ့ကသာမန်ယောက်ျားလက်တဆစ်စာလောက် ကြီးပါတယ် ကြော်စားဆားရည်စိမ် တို့စရာအဖြစ်လည်းကောင်း ဒီအတိုင်းလည်း စားရပါတယ် အပင်ကမကြီးပင်တို့လိုနှစ်ရှည်ပင်ပါ တချို့အပင်တွေဟာလက်နဲ့ အတောင်
၃၀/၄၀ မြင့်ပြီး အပင်ရဲ့လုံးပါတ်ကလူ၂ဖက်စာလောက် ကြီးမားပါတယ်။ အခွံကိုဇွန်းနဲ့ခြစ် မီးနဲ့ဘဲကင်ကင် ပြုတ်ပြီးပဲစားစား စားကောင်းတယ် ငပိချက်နဲ့ရောချက်လည်း စားကောင်းတယ် အနံ့က ဒညင်းသီးနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ဘောစ(စ်)ကိုင်းပင်နဲ့ မတူပါဘူး။ ဘော
စ(စ်)ကိုင်းက အပူပိုင်းပေါက်ပင်ဖြစ်ပြီး မျောက်ငိုသီးပင်က အ အေးပိုင်းပေါက်ပင်ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း တမူးမြို့နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် တွေမှာ အများအပြားရှိပါတယ်။
အိပျခါနီးရမေသောကျရငျ သငျ့အသကျကို သစေနေိုငျပါတယျ